नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको चर्चा गर्दा बारम्बार उदृत गरिने प्रसंग हो- अमेरिकी अखबार न्युजविकको अन्तरवार्ता ।
शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ ८:४७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको चर्चा गर्दा बारम्बार उदृत गरिने प्रसंग हो- अमेरिकी अखबार न्युजविकको अन्तरवार्ता । अमेरिकी अखबारले नेपाली नेताको लामो अन्तरवार्ता छाप्नु आफैंमा दुर्लभ थियो नै, अन्तरवार्तामा भण्डारीले बोलेका कुराहरु पनि उत्तिकै चर्चायोग्य थिए । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
शक्तिशाली महासचिव भण्डारीले पेलपाल पारेर जबज पास गरेका थिएनन् । जबजको विकल्पमा आएका सिपी मैनालीले झलनाथ खनालदेखि सहाना प्रधानको समर्थनमा ल्याएको ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’, मोहनचन्द्र अधिकारीले ल्याएको ‘नौलो जनवाद’ र रघुजी पन्तले ल्याएको ‘सामाजिक जनवाद’लाई महाधिवेसन हलबाट अस्वीकृत हुँदा मदनको विचार पास भएको थियो । मदनको बिचारमा ५४१ मत आउँदा मैनाली, अधिकारी र पन्तको पक्षमा भने क्रमशः १०१, ५५ र ० मत आएको थियो । मदन भण्डारीले सर्वसम्मत पास गराउने पक्षमा थिए । तर, सहमति नजुटेपछि लोकतान्त्रिक विधि अपनाइएको थियो । एमालेको इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइएको प्रथम बैचारिक मन्थन त्यही थियो भन्दा हुन्छ ।
लज एन्जलस टाइम्समा मार्क फिनमेनले दिल्लीबाट समाचार लेखेको ठीक १२ दिनपछि मदन भण्डारीको अन्तरवार्ता न्युजविकले छाप्यो । अन्तरवार्ता लिन माइकेल लिट्भिन भने काठमाडौ नै आएकी थिइन् । अब त्यही अन्तरवार्ताको चर्चा गरौँः
जात, भाषा र धर्मको सवाल मदन भण्डारीलाई माइकेल लिट्भिनको छैटौँ प्रश्न थियो– जात व्यवस्था र धार्मिक स्वतन्त्रतामा तपाईको पोजिसन के हो? यो प्रश्नमा मदनले उत्तर दिएका छन्, ‘हामी विभिन्न जातजातिहरुमा हुने सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न चाहन्छौं । तर, हामी विभिन्न जनजातिका संस्कृति, रहनसहन र धर्मको सम्मान गछौं । जबजमा जात र धर्मको सवाललमा मदनको यही भाव आएको छ । जबजको ३.१२ बुँदाको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ लेखिएको छ ।
क्षतिपूर्ति सहितको भूमिसुधारको सवाल विश्वभर कम्युनिष्ट सत्ता आएपछि जमिन्दारहरुको जग्गा बलपुर्वक कब्जा हुन्छ भन्ने धारणा थियो । धेरै देशमा त्यस्तो भएको पनि थियो । यहि मुद्धामा न्युजविकको सातौं प्रश्न आयो मदन भण्डारीलाई । उनलाई सोधियोः तपाँई तपाईको देशका जमिनदारहरुलाई कस्तो व्यववहार गर्नुुहुन्छ ?
वैदेशिक सहयोगको सवाल आम रुपमा धनी तथा शक्तिशाली देशलाई कम्युनिस्टले ‘औपनिवेशिक’ र ‘सामाज्यवादी’ भन्दै आएका छन् । यसै मेसोमा कम्युनिष्टको सरकार बने विदेशी सहयोग नलिने वा नआउने हो कि भन्ने बारेमा धेरैको चासो थियो । न्युजविकले मदन भण्डारीलाई गरेको दसौं प्रश्न थियोः नेपालमा कम्युनिष्टको बहुमत आएमा वैदेशिक सहयोग कटौती हुने भन्ने कुरामा तपाई कत्तिको चिन्तित हुनुहुन्छ?
भारतसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिको सवाल मदन भण्डारीको सम्भावित विदेश नीति र भारतसँगको सवालमा न्यूजविकले सोधेको एघारौं प्रश्न थियोः भारततर्फ तपाईं कस्तो खालको परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्नुहुन्छ ?